Wednesday September 09, 2020 - 08:20:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Isagoo iska indhatirayo dhammaan digniinihii uga imaanayay xukuumadda Addis Ababa ayuu ismaamulka gobolka Tigree ee ka dhisan waqooyiga Itoobiya wuxuu bilaabay doorashooyinka guud ee maamulkaasi.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in saaka aroortii hore ay doorashooyinka baarlamaaniga ah ka bilaawdeen dhammaan degmooyinka iyo deegaannada maamul goboleedka Tigreega.
Saraakiisha ammaanka ee ismaamulka ayaa sheegay in kumanaan askari oo isugu jira boolis iyo melleteri ay ku daadiyeen dhammaan xuduudaha uu gobolku lawadaago ismaamullada kale sida Amxaarada,Cafarta iyo xuduudda Ereteriya.
Waxaa jirta cabsi laga qabo in melleteriga dowladda xabashida Itoobiya ay duullaan ku qaadaan gobolka oo madaxdiisu ay ku kacsanyihiin nidaamka abiy axmed R/wasaaraha xabashida.
Magaalada Maqalla ee caasimadda u ah qowmiyadda Tigreega waxaa ka bilaaqday dabaal degyo waaweyn oo ay dadku ku muujinayaan farxadooda ku aaddan in ay qabsanayaan doorashooyinkii ugu horreeyay waliba iyagoo isku arka in ay ka madax banaanyihiin xukuumadda Addis Ababa.
Xafiiska amniga iyo maamulka ismaamulka Tigreega ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ay joojiyeen isticmaalka moota dhug dhugleyda,baaskiillada iyo mootada sedax lugoolayda ee bajaajta loo yaqaan inta lagu guda jiro maalmaha doorashooyinka.
Siyaasiyiin katirsan xisbiga talada Tigreega haya ee TPLF ayaa sheegay in dad ka badan 2.5 malyan oo Tigree ah ay ka tashanayaan mustaqbalkooda siyaasadeed arrinkaas oo loo fasirtay in qowmiyaddan ay ka go'i doonto Itoobiya inteeda kale.
dhoollatus melleteri oo ay sameeyeen ciidamada maamulka ayaa banaanka soo dhigayay sida uu usoo dhowaaday isku dhaca labada dhinac, maamulka Abiy Axmed oo fatqalado siyaasadeed iyo kuwa amni wajahaya ayaan wali udhaqaaqin in uu dagaal lagalo tigreega oo 25-kii sano ee lasoo dhaafay majaraha uhayay talada itoobiya.